South Korea oo bilowday samaynta dayuurado u dhigma F-35 & dal Muslim ah oo la samaynaya + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka South Korea oo bilowday samaynta dayuurado u dhigma F-35 & dal Muslim...
South Korea oo bilowday samaynta dayuurado u dhigma F-35 & dal Muslim ah oo la samaynaya + Sawirro
(Seoul) 08 Sebt 2020 – Sharikadda Korea Aerospace Industries Co. (KAI) ayaa bilowday isku xirka dayuurad ay iyadu soo saarayso oo lagu sameeynayo Sacheon, koonfurta Seoul, sida ay sheegtay Hay’adda Barnaamijyada Ciidamada ee DAPA.
Mashruuca lagu samaynayo dayuuradaha KF-X oo ay ku baxayso 8.8 tarillyan oo Won (US$7.3 bilyan doollar), ayay South Korea soo waddey tan iyo 2015-kii si ay u samaysato dayuurado maxalli ah oo bedela raxanta gabowdey ee F-4 iyo F-5, sida ay sheegtay KAI oo xiganaysa DAPA.
Dayuuradahan oo naqshadooda la isku waafaqay sanadkii tegey ayaa iminka la isku xirxirayaa qaybihii ugu horreeyey waxayna leeyihiin tiknolojiyado casri ah sida raadaarka ku shaqeeya iskaan danabeedka ee loo yaqaan AESA.
Waxay dayuuradda ugu horreeysaa ay diyaar noqonaysaa wejiga hore ee sanadka soo aaddan ee 2021, halka ay DAPA filayso in dayuuradaha oo dhami diyaar noqdaan 2026-ka.
Waxay ku duuli karaan xawaare ku dhowaad 2 jeer guuxiisa ka dheereeya (Mach 1.81), waxay gaari karaan masaafo dhan 2,900 km, waxayna aad u shabbahaan dayuuradda jiilka 5-aad ee ee Maraykan sameega ah ee F-35A, sida ay KAI sheegayso.
Waxay leedahay 10 meel oo ay garbaha gantaaluhu uga xirmaan, iyadoo qaadi karta gantaalo badan oo cir-ka-cir ah sida kuwa Jarmanku sameeyo ee IRIS-T iyo kuwa MBDA ee raadaarka lagu hago.
Waxaa 6-da ugu horreeysa ee kambiyoonka ama sambalka ah ee la sameeyo midkood la siin doonaa dalka Muslimka ah ee Indonesia oo dayuuradahan wax ka samaynaysa, iyadoo qayb ka ah mashruuca KF-X.
Qashaafadda raadaarka ku shaqeeya iskaan danabeedka ee loo yaqaan AESA
Previous article”Haddii aan Turkiga oo naga xoog badan la dagaalno Faransiis noosoo gurman maayo” – Xildhibaan Giriig ah oo dalkiisa u digey
Next articleHeshiiska Imaaraadka & Israel oo aan wax wayn looga arkin gudaha Israel + Sababta (Qaybtii 3-aad)